USho Madjozi utyhola uBurna Boy-Iindaba zaseNigeria kunye neeNdaba zeHlabathi
SU-Madjozi utyhola uBurna Boy ngokuthatha i-'On it 'remix, i-CDC ithi iimeko ze-coronavirus zingaphindaphindwe kayishumi kunokuba bekuxeliwe, abadlali abali-10 be-NBA bavavanywa benayo i-coronavirus. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. USho Madjozi utyhola uBurna Boy ngokuthatha i-'Onayo (Remix) '
NgoJuni 2020, imvumi yoMzantsi Afrika kunye rapper, Sho Madjozi utyholwa Burna Boy yokuxelela iqela likaStormzy ukuba lithathe 'qobo lwaKho (Remix)' elambonisa ezantsi kumaqonga okusasaza. Uye wathumela ubungqina. USho Madjozi ubhale, "Kulabo babuza ukuba iphi i- #Ownitremix, emva kokuba ndonyulwe ecaleni kwakhe kwiBET Best International Act, inkwenkwe yaseBurna yacela iqela likaStormzy ukuba lehle ngokukhawuleza nengoma."
UBurna Boy uye wayiphendula loo nto “Okokwam AYIYO ngoma yam. Ukuba ilizwi lam likulo nangona kunjalo bekufanele ukuba licinywe ngokufanelekileyo. Ukuba i-remix ayicaciswanga ngelebheli (iAtlantiki yaseMelika) ifakwa kumakaki ngokuzenzekelayo. Akukho nto yakwenza nam ngokobuqu okanye nangawuphi na amabhaso. Soloko kufanelekile ukufikelela kwinqanaba lomsebenzi. Siyavuya kwi-BET's! Owu kwaye uvuyisana ne-brothas yam yobomi u-Dave, hus kunye ne-sefez endenze umculo we-LEGENDARY kunye! Sonke sityunjwe kwicandelo elinye kodwa umanyano luya kuhlala luphumelela! ”
2. IGhana ixolisa eNigeria ngokudiliza ubambiso
Amadoda axhobileyo kuxelwe ukuba abhabha iKhomishini ePhakamileyo kwiveki ephelileyo atshabalalisa isakhiwo esakhiwayo
UMongameli waseGhana Nana Akufo-Addo uxolise eNigeria emva kokuba kudilizwe isakhiwo ngaphakathi kweKhomishini eNkulu yaseNigeria eAqura
d. Umongameli Akufo-Addo uyalele ukuba kwenziwe uphando, isiteyitimenti sivela kurhulumente waseNigeria emva komnxeba wakhe noMongameli Muhammadu Buhari.
Amadoda axhobileyo kuthiwa abhubhise i-ofisi kwiveki ephelileyo atshabalalisa izakhiwo ezazisakhiwa. Abantu ababini babanjiwe malunga nesi sehlo. Baye babekwa ityala lokungena ngokungekho mthethweni kunye nokubangela ukonakala okungafanelekanga.
Usomashishini owayekade ebanga ukuba ungumnini womhlaba ekwakubekwa kuwo esi sakhiwo wakhokelela ekuchitheni udilizo, ngokwenqaku elithunyelwe kwiwebhusayithi yeKomishini eNkulu yaseGhana eGhana.
3. Ukuvalwa kwecuba kusayiyo njengoko iNkundla ePhakamileyo ilugxotha umba we-FITA eMzantsi Afrika
Isibhengezo secuba esinempikiswano eMzantsi Afrika, esithe sahlula-hlula izimvo zoluntu ukusukela oko kwavalwa okokuqala ngo-Matshi, sizakuhlala sikwindawo emva kokuba iNkundla ePhakamileyo yaseGauteng isirhoxisile isicelo esithethwe yi-Fair-Trade Independent Tobacco Association (FITA) ngoLwesihlanu, Nge-26 kaJuni.
Oku kungqinwe ngusihlalo we-FITA USinenhlanhla Mnguni, owayekhuthaze ukungavunyelwa kwecuba. UMnguni wayenethemba lokuba ukuthintelwa kweemveliso zecuba akuyi kuphumelela uvavanyo lwezobulungisa lwezobulungisa.
4. I-CDC ithi iimeko ze-COVID-19 e-US zinokuphinda phindwe kali-10 kunokuba bekuxeliwe
Inani eliyinyani labantu baseMelika abosulelwe yi-COVID-19 banokufikelela kwizigidi ezingama-20, ngokweqikelelo olutsha kumaZiko Olawulo lweSifo.
"Uqikelelo lwethu olulungileyo ngoku kukuba kwiimeko zonke ezichaziweyo, zikho ezinye izifo ezili-10," Dr. URobert Redfield, umlawuli we-CDC, uthethe ngomnxeba kunye nentatheli ngoLwesine.
Uvavanyo luvela ngokujonga iisampulu zegazi kwilizwe liphela ukubakho kwamayeza okubulala iintsholongwane. Kuwo onke amatyala aqinisekisiweyo e-COVID-19, abantu abayi-10 bangaphezulu baba ne-antibodies, utshilo uRedfield, ebhekisa kwiiprotein ezisegazini ezibonisa ukuba ngaba amajoni omzimba akhe alwa nayo i-coronavirus ngaphambili.
5. Abadlali abayi-16 bavavanywe ukuba banayo i-coronavirus ukusuka kuvavanyo angama-302
Ixesha le-NBA lamiswa nge-11 Matshi ngenxa yobhubhani be-coronavirus
Abadlali abayi-30 be-NBA bavavanyelwe i-coronavirus, ngeli xesha lonyaka elizayo ukuba baqhubeke ngoJulayi 302. Uvavanyo lwenziwa kubadlali abayi-16 ngoLwesibini. Abayi-XNUMX abaye bavavanywa benesifo sokuziphatha banokuhlala bodwa kwaye kuya kufuneka bacocwe ngugqirha ngaphambi kokuba babuye kuqeqesho.
Ukusebenza komntu ngamnye kulindeleke ukuba kuqale nge-1 kaJulayi kwaye amaqela anokuthi afike kwiDisney World Resort eFlorida, apho ixesha lonyaka liza kuqala khona, ukusuka nge-7 kaJulayi 9. Iinkampu zoqeqesho ziya kuqhubeka ukususela nge-29 kaJulayi.
Bona kwakho: I-Burna Boy iQokelela iMagazini ye-GQ
Uhlobo Rave Juni 26, 2020